विश्वकप जितेपछि अस्ट्रेलियाका खेलाडीको ‘अनौठो’ उत्सव, जुत्तामा हालेर किन पिए बियर? - Dainik Online Dainik Online
विश्वकप जितेपछि अस्ट्रेलियाका खेलाडीको ‘अनौठो’ उत्सव, जुत्तामा हालेर किन पिए बियर?
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७८, सोमबार १२ : ४०
अस्ट्रेलियाली टिमको सेलिब्रेसनका तस्बिर र भिडियो भाइरल भइरहेका छन्। स्टिभ स्मिथले पनि एडम जाम्पाको प्रशंसा गर्दै सेल्फी पोस्ट गरेका छन्। अस्ट्रेलियाका खेलाडी म्याथ्यू वेड र मार्कस स्टोइनिसले जितपछि मनाइरहेको सेलिब्रेसन अनौठो छ। यी जब वेडले आफ्नो जुत्तामा रक्सी पिए, स्टोइनिसले उनको पछाडि उस्तै विजयको उत्सव मनाइरहेको देखियो।
त्यसपछि मिचेल मार्स र डेभिड वार्नरको जोडीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै टोलीलाई जितको दौडमा पुर्‍यायो । वार्नर ५३ रनमा आउट भए, तर मार्सले ५० बलमा अविजित ७७ रन बनाए। अर्कोतर्फ ग्लेन म्याक्सवेल १८ बलमा २८ रन बनाएर नटआउट रहे।
जुत्तामा मदिरा पिउनुको कारण?